ZTE gosipụtara ZMax Pro, mkpanaka 6 "FullHD mobile maka $ 99 | Androidsis
ZTE ZMax pro bụ onye ọrụ ugbu a na ihuenyo 6 'FHD na batrị 3.400 mAh maka $ 99
Manuel Ramirez | | Batrị, Noticias, ZTE
na phablets na ezigbo ọnụahịa bụ abụọ n'ime njirimara kachasị njirimara nke ọtụtụ n'ime ọdụ ndị nwere ike ịrịgo na ndepụta kacha ere ahịa. Ọ bụ ezie na ndị buru ibu na-aga n'ihu na oke ha dị elu, usoro kachasị dị na-aga n'ihu na-enwe mmeri yana ọnụ na-erute nnukwu nha na ihuenyo ka enwere ike igwu ụdị ọdịnaya dị iche iche site na akụkụ ndị ahụ. Ma ọ bụ na taa ihe gam akporo ngwaọrụ nwere ezi ekweisi na ezigbo ihuenyo nwere ike inye ọtụtụ awa na awa nke ezigbo ntụrụndụ.
Mgbe ọ na-abịa ezigbo ahịa, n'ezie ọhụrụ ZTE ZMax Pro bụ otu nke ezigbo igwe n'ụzọ nke a. Ama nke nwere nkọwapụta dị oke mma yana nke na-eji 6-inch Full HD screen, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, igwefoto 13 MP na azụ na batrị 3.400 mAh ka ọ bụrụ na, maka dollar 99, ị nwere ike iyi ya siri ike na ndị asọmpi ndị ọzọ. yana ndị ọrụ ga-amalite iwe na ekwentị ha dị ugbu a iji lelee ịzụta nke a.
1 A phablet iji tụlee
1.1 ZTE ZMax Pro nkọwa
A phablet iji tụlee
A na-eji ọnụ ndị a nwere ọtụtụ sentimita eme ihe ihe ka mma ogo ngwụcha ngwụcha nke mere na anyị agaghị ebu brik na obere akpa anyị ma ọ bụ n'akpa uwe. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ọrụ mechara kpebie na ọdụ ndị a iji dochie akụrụngwa ndị ọzọ dịka laptọọpụ ma ọ bụ PC iji nweta ihe niile ha chọrọ site na ihuenyo 6-inch. Onye ọ bụla nwere ike ịkwaga nnukwu obodo maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe, n'ezie ha ga-eche echiche nke ọma banyere ịhọrọ nke maka ịchekwa ohere.
Na ZTE ZMax Pro, ọ bụ ezie na o nwere ndị 6 sentimita asatọ, echefubeghị banyere mkpebi na Full HD Ọ dị maka ndị zuru oke ịmalite ụdị ọdịnaya dị iche iche. IPS panel nke na-anọ ihe dịka ihe 367 kwa inch na Gorilla Glass 3. Na ngwụcha ya, anyị nwere ike ikwu maka mgbawa octa-core Snapdragon 617 na ebe nchekwa RAM ruru 2 GB. Banyere nchekwa dị n'ime, anyị na-aga 32 GB, yana nhọrọ nke iji kaadi micro SD iji ruo 128 GB. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ ama ama azụrụ nke ọma na akụkụ ya niile.
Ọ bụrụ na anyị gaa igwefoto, anyị ga-anọgide na-ebuli atụmanya banyere ZTE a, ebe ọ nwere a Igwefoto 13 MP nwere nchọpụta oge na-elekwasị anya na ọkụ ọkụ, mgbe ihu dị ihe dịka 5MP; karia ihe zuru oke maka selfies kacha mma. Mkpisiaka nyocha dị n'okpuru igwefoto azụ.
Na ihe ijuanya bụ na batrị adịchaghị njọ site n'inwe 3.400 mAh ikike nke ahụ kwụpụkwara maka itinye njikọ USB Type-C na 3,5mm njikọ jack. Chargingkwụ ụgwọ ngwa ngwa adịghị efu maka ngwa Ndenye Ndenye. Sọftụwia ahụ nwere gam akporo 6.0 Marshmallow, yabụ onye ọ bụla nwere obi ụtọ.
ZTE ZMax Pro nkọwa
6 ″ Full HD IPS (1080 x 1920) 367 ppi ihuenyo, ozodimgba iko 3
Qualcomm Snapdragon 617 octa-isi mgbawa
32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime yana nkwado maka microSD ruo 128 GB
13 MP n'azụ igwefoto na-adọ nchọpụta autofocus na ikanam flash
3.400 mAh batrị
Jackmm nke ọdịyo 3,5mm
A gam akporo 6.0 Marshmallow na MiFlavor
WiFi b / g / n (2.4GHz & 5GHz), WiFi oku, Bluetooth 4.1, LTE, GPS / AGPS / SUPL / Fm Radio
Akụkụ: 165,1 x 83,8 x 8,9
Arọ: gram 174
N'oge a ọ ga-abata n'ọnwa Ọgọstụ dịka ọnụ na-enweghị njedebe nke onye ọrụ America MetroPCS na ọnụahịa ya bụ dollar 99, ịgbanwe na euro banyere 89. Anyị ga-echere ntakịrị iji nwee ike ịnweta akụkụ ndị a, ma ọ bụrụ na ọ mechara mee dị ka nke a. Storeslọ ahịa na-ebubata ngwaahịa ga-anọgide. Nwere ike lee anya na nke a ịhụ ma ọ na-eme gị obi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE ZMax pro bụ onye ọrụ ugbu a na ihuenyo 6 'FHD na batrị 3.400 mAh maka $ 99
Zaghachi Alexandre Mateus
Ọ ga - abụ na ọ bụrụ na m zụta ya, ọ ga - abịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ya bụ, enwere ike ịgbalite ya ebe a n'Ekwedọọ?
N'ime obodo dijo
Aghotara na obughi sim sim?